Ciidamada dowladda oo dagaalka Gedo ku qabtay maxaabiis ka tirsan Al-shabaab. – Radio Daljir
Garbahaarrey, May 13 – Saraakiisha ciidamada dowladda ururka Alshabaab kula dagaallamaya degaanno ka mid ah gobolka Gedo ayaa maanta sheegey in ay saaka gacanta ku dhigeen 5 ka mid ah dagaalyahannada ururka Alshabaab.
Sarkaal ka mid ah ciidamada dowladda gobolkaas uga dagaallamaya ayaa sheegey in qabashada dableyda ka tirsan xarakada Alshabaab ay ka dambaysay markii dagaal qadhaadh uu galinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo, waxana uu sheegey Cabdi Maxamuud Nuur in saaka ay ciidamada dowladdu meel u dhow jiidihii shalay lagu diriray ay u galeen 13 ka mid ah sahanka ururka Alshabaab, isla markaana 5 ka mid ah ay halkaas ku qabteen.
Cabdi Maxamuud Aadan oo Daljir la hadlay ayaa sheegey in 4 ka mid ah maxaabiista dagaal ee ay qabteen ay haatan xabbisanyihiin, halka maxbuuska shanaadna uu yaallo goob caafimaad oo lagaga dawaynayo dhaawac soo gaadhay.
Dagaalka ka socda gobolka Gedo ee u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay isgarabsanayaan Ahlu-sunna Waljameeca iyo ururka Alshabaab oo ka soo horjeeda ayaa khasaaraha ugu badan ee ay dhinacyada dagaallamaya dagaalkaas ka sheegaan uu ku saabsanyahay khasaaraha ay dirirta isku gaadhsiiyaan, halka aanay jirin cid soo hadal qaadda khasaaraha shacabka ka soo gaadha dagaallada halkaas ka socda.